The FNG | Page 258
December 19, 2008 by 21 South News
ှမြန်မာနိုင်ငံရှိအချိူ.ထောင်များတွင်MBBSဘွဲ.ရထောင်ဆရာဝန်များမရှိဘဲ အကျဉ်းဦးစီးဌာနမှဆေးမှုးများအဆင့်သာရှိသည်ဟုသိရသည် ။ (ဂ)အုပ်စုအ ဆင့်ရှိ ဘူးသီးတောင်ထောင်၊ပူတာအိုထောင်နှင့်ခန္ဓီးထောင်တို့တွင် ထောင်ဆရာဝန် များမရှိဘဲဆေးမှူးအဆင့်သာရှိသည်ဟု အင်းစိန်ထောင်၊မြောင်းမြထောင်နှင့်
သတင်း ဆောင်းပါး, News
မြန်မာလက် ရွေးစင်အသင်းကို ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှ စတင်ကိုင်တွယ်ခဲ့သည့်ဖလော်ပါမှာ၎င်းကိုင် တွယ်စဉ် လက်ရွေးစင်အသင်းမှာ နိုင်ငံတကာအဆင့်ပြိုင်ပွဲ ၇ ခု ၀င် ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သော်လည်း ဆူဇူကီးဖလားပြိုင်ပွဲတွင် အောင်မြင်မှုမရရှိခဲ့ဘဲ အုပ်စုအဆင့် လှည့်ပြန်ခဲ့ရခြင်းကြောင့် နည်းပြအဖြစ် ဆက်လက်မခန့်အပ်ခြင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်း အချို့သောသတင်းရပ်ကွက်များ ကဆိုသည်။ဆရာများသားသေဖြစ်နေသောမြန်မာလက် ရွေးစင်အသင်းမှာနောက်ထပ်နိုင်ငံခြားသား နည်းပြတစ်ဦးလာ သောလည်းစွံမည့်ပုံမပေါ်ချေ။
Is live blogging the future of media?
December 18, 2008 by 21 South News
Every momentous event nowadays is tracked by live blogs, posts and messages.
There are minute-to-minute updates as events unfold, from the earthquake in China, to the cyclone in Burma. The terror attack in Mumbai was no different, as eyewitnesses and citizen journalists communicated with millions around the world.
သတင်း ဆောင်းပါး, Technology
ဒီမိုကရက်ပါတီခေါင်းဆောင် အင်္ဂလန်နိုင်ငံ အောက်စဖို့ဒ် တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရ အာဘီဆစ်ဝိဇ္ဇာဇီဝထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်သစ်အဖြစ်ရေးချယ်ခံရမှုသတင်းများကိုစာပေ စိစစ်ရေးမှဖြတ်တောက်မှုရှိသည် ဟုသတင်းရရှိသည်။ အရင်လကတော့စီးပွားပျက်ကပ်ယတင်းကိုသူတို့သဲသဲမဲမဲ ဆင်ဆာဖြတ်တယ်အခုတောအာဘီဆစ်သတင်းကိုဂျာနယ်မျက်နှာဖုံးမှာမတင်ရဘူးလို့ညွှန်ကြား ထားတယ်လို.ပြည်တွင်းမီဒီယာသမားတစ်ဦးကပြောပြပါတယ်။ အောက်စဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရ၊အဂ်လန်တွင်မွေးဖွားသူစသည့်အာဘီဆစ်နှင့်သက်ဆိုင် သည့်ကြောင်းအရာများကိုစိစစ်ရေးမှဖြုတ်ပယ်သည်။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်သစ်အဖြစ်ဒီမိုကရက် ပါတီခေါင်းဆောင်အာဘီဆစ်ဝိဇ္ဇာဇီဝရွေးချယ်ခံရ မှုအတွက်မြန်မာလူထုကလည်းနှစ်ခြိုက်ကြသည်။
တိုင်းမဂ္ဂဇင်း၏Person of The Year အိုဘားမား
December 17, 2008 by 21 South News
၄၄ဦးမြောက် အမေရိကန် သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရလိုက်တဲ့ဒီမိုကရက်ပါတီ သမ္မတလောင်း ဘရက်ခ် အိုဘားမားကို နာမည်ကျော် တိုင်း မဂဇင်းကြီးက person of the year အဖြစ်ရွေးချယ်ဂုဏ်ပြုဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ အိုဘားမားကိုအဓိကရွေးချယ်လိုက်ရတဲ့ အကြောင်းကတော့ အိုဘားမားက သူ့ကိုထောက်ခံသူတွေကို သူ့ အနိုင်ရလိုက်ကြောင်း ပြောကြားတဲ့ မိန့်ခွန်းမှာပါတဲ့“တကယ်လို့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ အရာရာတိုင်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတာကို သံသယရှိသူတွေ ရှိနေအုံးမယ်။ ကျနော်တို့ တိုင်းပြည်ကို ထူထောင်ခဲ့သူတွေ […]
Internet Explorer may Harmful Your Computer
မလုံခြံ စိတ်မခဵရတဲ့ အိုင်အီး (IE – Internet Explorer) ကို လက်လတ်္ဘြပီး၊ မီးလ္တွံေူမခြေးလို သန်မာ စိတ်ခဵရတဲ့ ဖိုက်ယားဖောက်စ် (Firefox) ကို သုံုးကစိုႛ မိုက်ခ႟ိုဆော့ဖ် (Microsoft) ကထုတ်တဲ့ အိုင်အီး (ခေၞ) အင်တာနက် အိပ်ခဵ်ပလိုးယား ဘရောက်ဇာ (Internet Explorer, IE browser) ကို မသုံုးကဖိုႛ၊ […]
ဘာလေးဘာဟု မြန်မာစာနယ်ဇင်းသမားတို့ခေါ်တွင်သော စက်တင်ဘာလမှဒီဇင်ဘာလအတွင်းဂျာနယ် မဂဇင်းရောင်းအားမှာကျဆင်းလျှက်ရှိပြီးနာမည်ကျော် ဂျာနယ်များပင်လျှင်စောင်နှစ်ထောင်မပြည့်ကြောင်းပြည်တွင်း မီဒီယာအသိုင်းအ၀ိုင်းမှကြားသိရသည်။။
၁၉၉၈ ခုနှစ်ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုခေါင်းဆောင်ကိုမျိုးမင်းဇော် မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းတွင် ဆောင်းရာသီ အအေးဒဏ်၏ ရာသီဥတုဆိုးရွားမှုကြောင်.အပူချိန်မှာရေခဲမှတ်အောက်ရောက်နေပြီး ယမန်နေ့က၄၈ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်သာရှိသည်ဟုသိရသည်။ပူတာအိုထောင်တွင်းရှိနိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများမှာလည်းဆိုးရွားသည်.အအေးဒဏ်ကြောင်.ကျန်းမာရေးအခြေနေချို.ယွင်း လျှက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ပူတာအိုထောင်တွင်ထောက်ဒဏ် ၅၆ နှစ်ကျခံနေရသော ၁၉၉၈ ခုနှစ်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ကိုမျိုးမင်းဇော်နှင်. ထောက်ဒဏ် ၉၃ နှစ်ကျခံနေရသောSNLD ခေါင်းဆောင် ဦးခွန်ထွန်းဦးတို.ရှိသည်။ ယခင်လကထောင်ဒဏ် ၆၅ နှစ်ချမှတ် ခံရ သူ ၈၈ မျုိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ကိုအောင်သူမှာလည်းပူတာအိုထောင်သို့ပြောင်းရွေ့ခံထား ရပြီးဖြစ်သည်။ရွှေဘိုထောင်တွင်းရှိ မဇင်မာအောင်၏ ကျန်းမာရေးရေးမှာလည်း ဆိုးရွားလျှက်ရှိသည်။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွှတ်ပေးရန် အာရှ-အာဖရိက ကိုယ်စားလှယ်များ တောင်းဆို
December 16, 2008 by 21 South News
နန်းဒေ၀ီ အင်္ဂါနေ့၊ ဒီဇင်ဘာလ 16 2008 17:16 – မြန်မာစံတော်ချိန် နယူးဒေလီ (မဇ္ဈိမ)။ ။ အာရှ-အာဖရိက လူမှုအဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ စုပေါင်းပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် အကျဉ်းကျခံနေရသည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ အမြန်ဆုံး လွှတ်ပေးရန် ယနေ့ တောင်းဆိုလိုက်သည်။
အိမ်ထောင်ရေးကံမကောင်းသဖြင်.အနားယူနေသော သရုပ်ဆောင် မြတ်ကေသီအောင် ၏အိမ်ရှိရာ ဒဂုံမြို.သစ်ပြည်ပန်းညိုအိမ်ရာသို.အလိုက်မသိသော ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးက ပေါ်လစီဇာတ်ကားရိုက်ရန်သွားရောက်ကမ်းလှမ်းသည်ဟုသိရသည်။ ကာယကံရှင်၏အကြောင်းပြန်ချက်ကိုမူမသိရသေးပေ။
ဆေးတက္ကသိုလ်စာမေးပွဲအပြီး ဆီဒိုနား ဟိုတယ်တွင် ရည်းစားဖြစ်သူသန်းရွှေရဲ့မြေးနေရွှေသွေးအောင် (ခေါ်) ဖိုးလပြည့်နှင်. ချစ်ရည်လူးခဲကြသည်ဟုရန်ကုန် တွင်သတင်းထွက်နေသည်.မော်ဒယ်နေခြည်လင်းလဲ့
အတိုက်အခံ ဒီမိုကရက်ပါတီခေါင်းဆောင် ၀န်ကြီးချုပ်အဖြစ်အရွေးခံရ
အတိုက်အခံ ဒီမိုကရက်ပါတီခေါင်းဆောင် အင်္ဂလန်နိုင်ငံ အောက်စဖို့ဒ် တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရ အာဘီဆစ်ဝိဇ္ဇာဇီဝသည် ဘန်ကောက် တွင် ကျင်းပသည့် လွှတ်တော်အစည်းအဝေး၌ (၂၃၅) မဲဖြင့် အနိုင်ရရှိကာ ထိုင်းနိုင်ငံ၏ (၂၇) ကြိမ်မြောက် ၀န်ကြီးချုပ် ဖြစ်လာသကဲ.သို.လေးလအတွင်းတတိယမြောက် ၀န်ကြီးချုပ်လဲဖြစ်လာခဲ.သည်။ People Power Party တဖြစ်လဲ ပွေထိုင်းပါတီကလည်း ပွေပါဒင်းပါတီခေါင်းဆောင် ရဲချုပ် ပရာချာ ပရောင်မန့်ကို ၀န်ကြီးချုပ်သစ်နေရာ လျာထားပြီး […]
Daughter of Myanmar ex-dictator released
ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရန်အတွက်ပြန်လွှတ်လိုက်သည်ဟု ရန်ကုန်တွင်သတင်းထွက်နေသည့် အာဏာရှင် ဟောင်းဦးနေ၀င်း၏သမီးဒေါ်စန္ဒာဝင်း ၁၉၇၀ပြည့်လွန်နှစ်များက ဒေါ်စန္ဒာဝင်းမှာရန်ကုန်မြို့အမှတ် ၂စစ်ဆေးရုံတွင်ဆေးတပ်ဒုတိယဗိုလ်မှူး ကြီးအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူးသည်။
ရတနာပုံ ICT ပြပွဲတွင် ဆိုင်ခန်းနေရာချထားမှုများ ဘက်လိုက်မှုရှိ
လက်ရှိကျင်းပနေသော ရတနာပုံ ICTပြပွဲတွင် ဆိုင်ခန်းနေရာချထားမှုများမှာ အာဏာရစစ်ခေါင်းဆောင် များနှင့် နီးစပ်သည့်အသိုင်းအ၀ိုင်းများပေါ် လက်သင့်ရာစားတော်ခေါ်ကာဦးစားပေးချထားသည်ဟုအရောင်းဆိုင်အချုိ့မှမကျေနပ်သံများထွက်ပေါ်နေသည်။ သာမန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၏ဆိုင်ခန်းများကိုလူသူအရောက်အ ပေါက်နည်းသည့်နေရာများတွင်ချထားပေးမှုကြောင့် ကွန်ပျူတာလုပ်ငန်းရှင်အသိုင်းအ၀ိုင်းမှ ဝေဖန်လျက်ရှိကျသည်။ သွားလာရန်ခက်ခဲသည့်ရတနာပုံမြို့သစ်တွင်ကျင်းပမှုကြောင့်ပွဲမှာလည်းထင်သလောက်စည် ကားမှုမရှိချေ။
ဗင်နီးဇွဲလား တရား ရုံး ပေါ် ဟယ်လီကော်ပတာ နဲ့လက်ပစ်ဗုံး ကြဲချ
မင်းသားဝီလျှံ ၏ မင်္ဂလာပွဲ ကို တက်ရောက်ရန် ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး မိသားစု ပြင်ဆင်နေ
ပိုလျှံနေသော ၀ါကျများ (သစ္စာနီ) ဒီတစ်ပတ် တနင်္ဂနွေ ရသ လွင်ပြင်
ဒေါ်စု နှင့် မျိုးဆက်သစ် သားငယ် ကိုထိန်လင်း ရွှေတိဂုံ ဘုရား ဖူး မျှော် ကြည်ညို
ဒုတိယ သမ္မတ အဖြစ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဥာဏ်ထွန်း ကျမ်း သစ္စာ ကျိန်ဆို